दैलेखमा श्रीमती बेच्नेलाई ३८ वर्ष कैद सुनाइयो
काठमाडौं । दैलेखमा एक व्यक्तिलाई ३८ वर्ष कैद फैसला गरिएको छ । भैरबी गाउँपालिका–४ भैरीका २१ वर्षीया टेकराज पुरीलाई उक्त कैद फैसला गरिएको हो । आफ्नै श्रीमती र छोरालाई बेचेको आरोपमा..
अब अमेरिकाको भिसाका लागि सामाजिक सञ्जालको विस्तृत विवरण पनि दिनु पर्ने
नयाँ कानून अनुसार अमेरिकाको भिसाका लागि निवेदन दिने सबैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको विस्तृत विवरण पेश गर्नु पर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश विभागले जारी गरेको नयाँ नियम अनुसार भिसाका लागि निवेदन..
जहाँ आकाशबाट हिराको वर्षा हुन्छ, तर के गर्ने......
एजेन्सी । सौर्यमण्डलबाट धेरै टाढा ग्यासबाट बनेको विशाल ग्रह हो, यूरेनस तथा नेपच्यून । नेपच्यून धर्तीभन्दा धेरै टाढा छ । यहाँको तापक्रम शुन्यदेखि २ सय डिग्री सेल्सियससम्म रहन्छ । यहाँ..
एजेन्सी । मध्य प्रदेशमा पब्जी खेल्ने क्रममा एक १६ वर्षे किशोरको हृदयघात भएर मृत्यु भएको छ । शुक्रबार किशोरका पिता फरुन कुरेशीले दिएको जानकारी अनुसार उनका छोराले ६ घण्टासम्म मोबाइल..
बालगायकद्वय आयुष र प्रितम ‘सारेगमप’ को सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ । नेपालका बालगायकद्वय प्रितम आचार्य र आयुष केसी ‘सारेगमप’ को सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। शुक्रबार दुवै बालकले फेसबुक मार्फत सेमिफाइनलमा पुगेको जानकारी गराएका छन्। भारतीय गायन रियालिटी कार्यक्रम ‘सारेगमप’ जी..
बालविवाहको माग गर्दै आमाहरु जुलुसमा
नेपालगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुधबार महिलाले दिनभर धर्ना दिए । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलसँग माग गरे, छोरीको बिहे १६ वर्षमा गर्न पाऊ ।ु नेपालको कानुनले २०..
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ २३ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । मुस्लिमहरुको महत्वपूर्ण पर्व इद उल फितरको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री..
यस्तो छ १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठ पढ्नुहोस्)
काठमाडौं । सरकारले आव २०७६/७७ का लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको..
काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र नेपालको आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को वार्षिक बजेट बुधबार संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिँदैछ । नयाँ बजेट करिब १५ खर्बभन्दा बढीको हुने चर्चा छ । नेपालमा पहिलोपटक आजभन्दा ६८..
तराईँमा तापक्रम अझै बढ्ने, गर्मीबाट बच्न के गर्ने ?
काठमाडौँ । अबका केही दिन नेपालको पश्चिम तराईँको तापक्रम थप वृद्धि हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । तापक्रम वृद्धि हुँदा तातो हावा चल्न सक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन र..
काठमाडौं । सुनको खपत प्रत्येक देशमा भारी मात्रामा हुने गर्छ । झन् हाम्रो जस्तो धार्मिक संस्कारहरू धेरै भएको देशमा सुनको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ । तर कसरी बने र सुन र..
काठमाडौं । नेपाल वायू सेवा निगममा १० वर्ष बिताएपछि आजबाट महाप्रबन्धक सुगरसत्न कंसाकार बिदा भएका छन् । सोमबार बिदाइ हुँदै गर्दा उनले ४१ वर्षको अवधिमा आफूले कसरी २ वटा संस्थामा..
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुखका अंगरक्षकलाई यौन प्रस्ताव राख्ने स्वकीय सचिवलाई पदबाट हटाइएको छ । उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीकी अंगरक्षक महिला प्रहरीलाई फेसबुक म्यासेञ्जरबाट यौन प्रस्ताव राख्ने स्वकीय सचिव हरिश भट्टलाई..
एजेन्सी । दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरूमा ८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प आएको छ। स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान २ बजेर ४० मिनेट जाँदा भूकम्प आएको हो। सान मार्टिन क्षेत्रको राजधानी मोयोबाम्बादेखि ११० किलोमिटर पूर्व..
काठमाडौं । जापानमा गरिएको एक सर्वेक्षणले भात खाँदा मानिसको तौल घट्ने देखाएको छ । यो सर्वेक्षण १३६ देशका मानिसमा गरिएको थियो । ती मानिसको भात खाने चलन तथा क्यालोरी इनटेकलाई..
सगरमाथा चढ्नेको लर्को, सर्वोच्च शिखर मै जाम !
काठमाडौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या बढेसँगै बुधबार सगरमाथामा ट्राफिक जाम भएको छ । सगरमाथबाट आएको एफपीको तस्बिरमा पूरै चुचुरोमा आरोहीहरु लामबद्ध भएको देख्न सकिन्छ । हिमालका चुचुरोमा वल्लो..
काठमाडौं । सुन विश्वका महंगा धातुहरु मध्येको एक हो । यो व्यक्तिको मात्र होइन मुलुककै सम्पत्तिको सूचकको रुपमा पनि रहने गरेको छ । विश्वका धनी देशहरुसँग प्रसस्त मात्रामा सुनको भण्डारण..
काठमाडौं । मोरङको जहदा गाउँपालिका ४ मा दाइजो नदिँदा बेहुली विवाह छोडेर हिँडेका बेहुला पक्राउ परेका छन्। जेठ ३ गते २४ वर्षीय लक्ष्मण राजवंशी दाइजो नपाएपछि विवाह मण्डपबाटै हिँडेका थिए। उनलाई..
दमक । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख श्यामल सुब्बाले होटल एवं लजमा छापा मार्ने क्रममा समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति भेटिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । स्थानीय प्रशासनले समन्वय नगरेको र छापा मार्दा..
काठमाडौं । नेपालको सर्वे टोलीले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नापेको छ । बुधबार बिहान ३ बजे सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर टोलीले उचाइ नापेको हो । नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, रविन कार्की..
चेक बाउन्स मुद्दामा खुश्बु ओलीलाई तीन महिना कैद
काठमाडौं । चेक बाउन्स मुद्दामा मोडल खुश्बु ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबार खुश्बुलाई तीन महिना..
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल)लाई कम्पनीको शेयर स्वामित्व बिक्रीमा देखिएको पुँजीगत लाभकरको रकम तिर्न पत्र पठाएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले कम्पनीलाई पुँजीगत लाभ..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मार्छु भन्दै फेसबूकमा कमेन्ट गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोक लिशंखु गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय लालबहादुर तामाङलाई बिजुलीबजारबाट पक्राउ गरेको अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल..
एक्जिट पोल अनुसार मोदी स्पष्ट बहुमतको साथ भारतको पुनःप्रधानमन्त्री हुने
एजेन्सी । आइतबार भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम चरणको मतदान सकिए लगत्तै एक्जिट पोलहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। निर्वाचन लोकसभाका ५ सय ४२ सिटका लागि भएको थियो। चारवटा अलग अलग..
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने यात्रीहरुका लागि पनि हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था ट्राफिक प्रहरीले फेरि गर्ने तयारी गरेको छ। पछाडि बस्ने यात्रीहरुले हेल्मेट नलगाएका कारण दुर्घटना बढेको तथ्यांकपछि ट्राफिक..
जर्मनको एउटा स्टार्ट–अप कम्पनीले विश्वकै पहिलो आफैँ उड्ने पाँच सिटयुक्त ट्याक्सी सार्वजनिक गरेको छ । लिलियम कम्पनीले अघिल्लो महिनामा मात्र यसको नमुना परीक्षण गरेको थियो जुन आफैँ माथि उडेर अवतरण..
धेरै विदेशी माफियाले नेपाली नागरिकता पाए-उपेन्द्र यादव
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पैसाको भरमा थुप्रै माफियाले नेपाली नागरिकता लिएको दाबी गरेका छन् । नागरिकता नपाउने वास्तविक नेपालीहरु भने धेरै रहेको उनले बताए । समाजवादी पार्टीले पोखरामा..
भारतको हरियाणाको टोहानाका बासिन्दा रवि कुमार विश्वकै पहिलो नास्तिक भएका छन्। अब उनलाई रवि नास्तिकको नामबाट चिनिनेछ। उनलाई जिल्ला तहसिल कार्यालयले ‘नो कास्ट, नो रिलिजन, नो गड’ को प्रमाणपत्र नै..
शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीको कृति 'अरनिको' अब चिनियाँ भाषामा पनि
काठमाडौं । वाङमय शताब्दी पुरुष एवं वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको अनुसन्धात्मक कृति अरनिको चिनियाँ भाषा प्रकाशित हुने भएको छ । ललितपुरको बखुम्हालस्थिति जोशीको निवासमा शुक्रबार पुग्नुभएका चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले सो..
धादिङलाई केन्द्र बनाएर फेरी भूकम्प गयो
काठमाडौं । धादिङको कुम्पुरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । शुक्रबार २ बजेर ८ मिनेटमा ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पको धक्का आसपासका जिम्मामा समेत महसुस भएको थियो..
Results 289: You are at page4of 10